धेरै जागिरे महिलाको परपुरुषसँग सम्बन्ध हुने खुलासा ! - धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
धेरै जागिरे महिलाको परपुरुषसँग सम्बन्ध हुने खुलासा !
प्रकाशित मिति: २०७३, १९ आश्विन बुधबार २१:०४
धादिङ / विबाह गरेपछि जागिर खाएका महिलाहरू मध्ये धेरैजसोको बाहिर परपुरूषसंग सम्बन्ध कहुने कुराको खुलासा गरिएको छ । बैवाहिक जीवनमा लोग्ने स्वास्नी भएपछि सम्भोग भन्ने कुरा सामान्य हो । साथै वैवाहिक जीवनमा त यो धेरैनै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । तर यस खुलासाले भने धेरै मानिसहरूलाइ आश्चर्यमा पारिदिएको छ ।
जापानमा गरिएको नयाँ सर्भेले यहाँका आधाजसो दम्पतिले सहबास नगर्ने गरेको अनौठो कुराको खुलासा गरिएको छ । यहाँको एक कण्डम निर्माता कम्पनी सागमी गोमुले गरेको सर्भेमा जनाइए अनुसार जापानमा आधाजसो वैवाहिक सम्बन्ध सम्भोग रहित हुने गर्दछ । यसको कारण पनि निकै डरलाग्दो रहेको पाइएको छ । बाहिर जागिर गर्ने श्रीमतीहरुले बाहिरै परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेकै कारण लोग्ने स्वास्नीका बीचमा सेक्स नहुने गरेको कुरा उक्त सर्भेले खुलासा गरेको छ ।
यहाँका धेरैजसो कामकाजी महिलाहरुले आफ्नो लोग्नेसँग सम्भोग नगर्ने र कार्यालयको कामका सिलसिलामा भेट हुने पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने गर्दछन । जसका कारण उनीहरुले आफ्नो लोग्नेसँग सम्भोगका लागि तयार हुँदैनन ।
यस सर्भेक्षणमा सहभागी भएका ५०० जना ४० वर्षीय उमेरका महिलाहरु मध्ये ११ प्रतिशतले परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने गरेको स्विकार गरेका छन । त्यस्तै १२ प्रतिशतले आफ्नो लोग्ने भन्दा बाहिरको पुरुषसँग सम्भोग गर्न मन पर्ने जवाफ दिएका छन । केही महिलाहरूले भने नैतिक रुपमा परपुरुषसँगको सम्बन्धका बारेमा आफुले सोँच्न पनि नसक्ने बताएका छन । यस क्रममा १० प्रतिशतले भने आफुले परपुरुषसँग राखेको सम्बन्धका बारेमा लोग्नेले थाहा पाउला भनेर निकै डराउने गरेको जवाफ दिएका थिए ।
यस सर्भेमा परपुरुषसँग के को माध्यमबाट भेटेर सम्बन्ध राख्नुहुन्छ भन्दा ३१.५ प्रतिशतले कार्यालयमानै भेटेर आफुले रतिक्रिडा गर्ने गरेको बताएका छन भने २४ प्रतिशतले इन्टरनेट मार्फत सम्बन्ध कायम गर्ने गरेको बताए अर्को रमाइलो कुरा त साँढे १८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो पूर्व ब्वायफ्रेण्डसँग सम्भोग गर्ने गरेको बताए ।
यस सर्भेमा परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेका कारण आफ्नो श्रीमान सँग सम्भोग नगरेको कति वर्ष भयो भन्ने प्रश्न सोध्दा ६३ प्रतिशतले ११ वर्ष भएको बताए । परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने मध्ये ६८.५ प्रतिशतले यस्तो सम्बन्धका कारण आफुलाई कुनै पश्चाताप नरहेको स्विकार गरेका थिए ।
२०७३, १९ आश्विन बुधबार २१:०४ मा प्रकाशित